Ra’iisal Wasaare Rooble oo la shiray Wakiilada Beesha Caalamka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ra’iisal Wasaare Rooble oo la shiray Wakiilada Beesha Caalamka
Ra’iisal Wasaare Rooble oo la shiray Wakiilada Beesha Caalamka
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa muuqaalka foggaan aragga kulan kula qaatay qaar ka mid ah Xubnaha Wakiilada Beesha Caalamka, kuwaa oo ay ka wadahadleen xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha taagan ee saamaynta ku leh amniga, siyaasadda iyo geedi-socodka & dhameystirka doorashooyinka.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa muujiyay sida ay u taageersan yihiin habsami u fulinta howlaha doorashooyinka, ee uu Ra’iisal Wasaaruhu hormuudka u yahay.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa u sheegay Wakiilada Beesha Caalamka in is faham laga gaaray arrimaha doorashada Gobolada Waqooyi ee Somaliland, lana soo afjaray khilaafkii u dhaxeeyay labada dhinac, ayna degdeg u bilaaban doonto Doorashada Xildhibaanada Labada Gole ee metelaya Somaliland.
Sidoo kale waxa uu sheegay Ra’iisal Wasaaruhu in Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Maxamed Xuseen (Cali Guudlaawe) uu soo saaray liiska murshaxiinta kuraasta Aqalka Sare, isagoo u rajeeyay in doorashadu u qabsoonto, sida ugu dhakhsaha badan.
Waxuu kaloo xusay Ra’iisal Wasaaruhu in Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ay soo saareen jadwalka doorashooyinka oo faah faahsan.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa mar kale ku celiyay in ay ka go’an tahay in kiiska Ikraan Tahliil Faarax caddaalada la marsiiyo, isagoo rajeeyay in isaga iyo Madaxweyne Farmaajo ay arrintaas isku aragti ka noqdaan.
Previous articleFarmaajo oo ka horyimid xil ka qaadista Wasiirkii Amniga
Next articleDeni oo qaabilay wafdi ballaran oo ka socda Galmudug (SAWIRRO)